Ciidamada Dowladda oo Shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan Gobolka Baay – STAR FM SOMALIA
Taliska Qaybta 60-aad ee ciidamada Xooga dalka Somaliya ayaa sheegay in ciidanka ay gaareen deegaano ka tirsan Gobolka Baay oo gacanta ay ku hayeen Ururka Al Shabaab.
Gaashaanle dhexe C/raxmaan Macalin Axmed oo ah Sarkaalkii hogaaminaayay howlgal ciidamada ay kula wareegeen deegaanka
Goorisane oo ka tirsan Gobolka Baay, ayaa sheegay inay baxsadeen Shabaabkii deegaanka joogay.
Wuxuu sheegay Sarkaalkaan ciidamada Xooga dalka Somaliya oo ka soo ambabaxay Magaalada Baydhabo inay gaareen deegaankaan oo markii hore Shabaabka ay joogi jireen.
“Waxaan hada joognaa oo aad arkeysaa deegaanka Goorisane, nimanka tabartooda waxa ay rabaan inay dhahaan Baydhabo agteeda ayaan joognay halkaana Saldhig ayeey u aheyd wax dagaal ah ciidanka ma aysan la kulmin, saaka markii aan baxeynay meelaha dhan iyaga ayaa jooga la lahaa, laakiin waa ay carareen.” Ayuu yiri Gaashaanle Dhexe C/raxmaan.
Xoogaga Shabaab ayaa habeen hore saqdii dhexe waxa ay madaafiic ku garaaceen Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shalay oo dhan waxa ay wadeen howlgalo ay uga jawaabayeen Shabaabkii Madaafiicda ku garaacay Magaalada Baydhabo, waxaana u suuragashay ciidamada inay qabsadaan Deegankaan.
Al Shabaab ayaanan ka fogayn magaalada Baydhabo oo waxa ay ku dhuumaleystaan deeganada ku yaalo duleedka Magaaladaasi.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 07-08-2016